Akhriso Faafaahinta Howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Koonfurta Soomaaliya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Akhriso Faafaahinta Howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Koonfurta Soomaaliya.
On Sep 27, 2020 300 0
Dagaalyahamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay iyo Saakay weeraro saf ballaaran ah ku ekeeyay qaar ka mid ah xaruumaha iyo saldhigyada Ciidamada Dowlada Federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland ay ku leeyihin qeybo ka mid ah gobollada Shabeellaha Hoose, Jubada Hoose iyo magalada Muqdisho Ee caasimada Soomaliya .
Aroornimadii hore ee saaka ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weer ku qaaday saldhig ay askarta maamulka Jubaland ku leeyihiin deegaanka baar-sanguuNi ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka Jubada Hoose, waxaana la rumeysan yahay in halkasi khasaare lagu gaarsiiyay askarta maamulka Jubaland ee la shaqeeya shisheya keynya.
Sidoo kale Ciidamada mujaahidinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay Dagaal xooggan Ku qaaday saldhig ay askarta DF ay ku leeyihin degamada Yaaqshid ee Magaalada Muqdisho halkaas oo in mudo ah laga maqlayay Rasaas xooggan oo ay isdhaafsanayeen Mujaahidiinta Iyo Askarta Dfka.
Ilo wareedyo mas’uul ah ayaa inoo xaqiijiyay in weerarka Khasaare lagu gaarsiiyay askarta Dfka, walow aan la helin waxyeellada rasmiga ah ee gaartay askarta weerarka lagu qaaday ee ku sugnaa xaruunta degamada Yaaqshid ee magaalada Muqdisho.
Galabanimadii maantana, waxaa gudaha magaalada Muqdisho lagu dilay sarkaal katirsan ciidamada booliiska Dowladda federaalka oo magaciisa lagu sheegay Buulle, waxaana dilka geystay rag hubeysan oo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Marar badan magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay Howlgallo gaar ah, qaraxyo waaweyn iyo weeraro toos ah oo lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa Dfka waxaana muuqata sida dagaalyahanada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay awood ugu leeyihiin In har iyo habeenba Ay ka dagaalamaan gudaha magaalada muqdisho iyo duledkeeda.
Dhawaan ayey aheyd markii mu’asasada Al-kataa”ib ay soo bandhigtay Filim cusub oo lagu arkayay ciidamada xarakada Mujaahidinta Al-Shabaab oo dharaar cad weeraraya askar ka tirsan Dfka oo ku sugnaa duleedka Muqdisho Kuwaas oo dhibaato ku hayay gadiidleyda ku safra wadadaasi.
Dhanka kale Ciidamada malatariga wilayada islaamiga ah ee shabeellaha Hoose ayaa habeenkii xalay weeraro ku miray qaar ka mid ah saldhigyada Ciidamada DF-ka ku leeyihiin degaano ka tirsan Gobolka.
Goobaha ay mujaahidiintu weerarka ku qaadeen waxaa ka mid ah Saldhigyo ay askarya Dfka ay ku leeyihiin Dagmooyinka Awdheegle, Jannaale iyo Buulo Mareer Oo dhamaantood ka tirsan Wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose.
Dagaalada oo dhacay waqtiyo isku dhaw ayaa la rumeysanyahay in khasaare lagu gaarsiiyay askarta DFka ee la shaqeeya Shisheeyaha ku sooduulay Soomaliya
Ugu dambeyntii, ciidamada madaafiicda ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa duqeymo ku garaacay saldhiga ciidamada Jabuuti ee magaalada Dhuusmareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, halkaas oo uu ka howlgalo maamulka Galmudug.
Madaafiic dhowr ah ayaa ku dhacday saldhiga la beegsaday, waxaana jirin faafaahin rasmi ah oo laga helay khasaaraha, Dhuusmareebna waxaa kusoo noq noqonaya howlgallada ay fulinayaan ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.